Wararka – Page 60 – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Dhageystayaal kusoo Dhawaada Warka Subax Radio Simba ee Magaaladda Muqdisho waana Subaxnimo Sabti ah Tariikhdana ay ku beegan Tahay 27-04. 2019
Baarlamaanka Soomaaliya oo Kulan Ku Yeelanaya Magaaladda Muqdisho
Xildhibaanada Baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulankooda caadiga ahaa waxa ay ku yeelanayaan xarunta Golaha shacabka ee magaaladda Muqdisho. Ajendaha kulanka maanta ayaa ah aqrinta labaad Hindise sharciyeedka shirkadaha ganacsiga,kaasi oo la marsiiyay dhawaan aqrinta koowaad. Xildhibaabada Baarlamaanka Soomaaliya ayaa loo diray fariimo lagu wargalinayo in kulanka ay soo xaadiraan,islamarkaana ay waqtiga ilaaliyaan. “Xildhibaanada Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa ...
Ciidamadda Dowladda Somaliya oo Fashiliyay Qarax Baardheere
Wararka ka imaanaya Degmadda Baardheere ee gobolka Gedo ayaa ku waramaya in Ciidamadda Nabadd Sugidda ay fashiliyeen Miino la dhigay mid kamid ah xaafadaha magaalada. Qof kamid ah dadka deegaanka ayaa idaacadda Simba ee magaaladda Muqdisho u Sheegay in qaraxa la dhigay xaafada Masawa oo dad rayid ah ay degan yihiin. Waxa uu sheegay in shacabka ay Ciidamadda ku wargaliyeen,islamarkaana ...
Xarunta Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya ayaa lagu saxiixay heshiis Wasaaradu ay ku wareejisay 7-gaari oo looga talagalay howlawadeenada canshuuraha gobolka Banaadir, Dowlad goboleedyada Koofur galbeed iyo Hirshabeelle. Waxaanna madashii lagu saxiixayay goobjoog ka ahaa Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya Dr. C/raxmaan Ducaale Beyle, Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho C/raxmaan Cumar Cismaan (Injineer Yariisow), ku-xigeenkiisa Maaliyadda iyo Wasiiradda Maaliyadda Dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo ...
Dhageystayaal kusoo Dhawaada Warka Duhur Radio Simba ee Magaaladda Muqdisho waana Duhurnimo Isniin ah Tariikhdana ay ku beegan Tahay 22-04. 2019
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax gaari lagu dhajiyay oo barqanimadii maanta ka dhacay Magaalada muqdisho. Qaraxaan ayaa ka dhacay Isgoyska Tarabuunka Degmada Hodan ee Gobolka Banaadir. Sida ay inoo xaqiijiyeen goobjoogayaal gaariga qarxay ayaa ahaa kuwa raaxadda ah,waxaana ka badbaaday ruuxii watay. Inta la xaqiijiyay labo ruux oo shacab ah ayaa ku dhaawacantay qaraxa,waxaana loo qaday goobaha caafimaadka magaaladda ...
Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee dawladda Federaalka Soomaaliya oo maalmahan ku sugnaa magaalada Qaahira ee dalka Masar ayaa kulan la qaatay Ra’iisal wasaaraha dalkaas Mustafa Madbuuli, waxaana ay ka wada hadleen xiriirka Dawladaha Soomaaliya iyo Masar. Madbuuli waxa uu bogaadiyey dadaalada dib u kabashada ah ee Soomaaliya ay samaysay sanadihii dambe, waxaana uu balan qaaday inay sii ...
Mas’uul ka tirsan Maamulka Degmadda Ceel-waaq ee Gobolka Gedo ee Dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in maalin waliba uu hanjabaadyo kala kulmo saraakiil kenyaan ah oo ku sugan degmada Ceel-waaq. Sahal Macalin aadan gudoomiye Ku-xigeenka Ceelwaq oo la hadlay idaacadda Simba ee Muqdisho ayaa sheegay in hanjabaadyo aan kala joogsi laheyn ay kala kulmaan saraakiisha Kenyaan-ka. Waxa uu sheegay in xarunta ...
Qaramadda Midoobay ayaa dib u billowday bixinta mushaaraadka Ciidanka Kenya ee qaybta ka ah Howlgalka Nabad ilaalinta Midowga Africa ee AMISOM waxaana Bishii March ee sanadkaan ay Ciidanka Kenya heleen 3.75 million oo shillinka Kenya ah. Lacagtaan waxaa la bixin doonaa Seddexdii biloodba mar, waxaana ciidanku ay heleen lacagihii ka maqnaa muddo Todobo bilood ah. Dowladda Kenya ayaa muujisay walaaceeda ...
Ciidamadda Booliska Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa xalay howlgal ka sameeyay Degmadda Hodan ee Magaaladda Muqdisho. Howlgalkaan ayaa si gaar ah kaga dhacay xaafada Taleex ee degmada Hodan,waxaana inta uu socday baaritaano lagu sameeyay goobaha Ganacsiga, Gaadiidka dadweynaha iyo guryo dhowr ah. Ciidamadda Booliska Soomaaliya aaya howlgalka kusoo qabtay dhalinyaro fara badan,waxaana la iskugu geeyay goob fagaaro ah oo ku taalla ...
Page 60 of 1,830« First...304050«5859606162	»	708090...Last »